कोरोना संक्रममण दर घट्यो, आईसीयू र भेन्टिलेटरमा चाप कम
सोमवार, श्रावण ११, २०७८ १२:५६:२७ युनिकोड
उपत्यकाका १६ अस्पतालमा ४ सय २७ आईसीयूमध्ये २ सय ५३ प्रयोगमा
आइतवार, असार ६, २०७८ नेपाली हामी
ललितपुर, ०६ असार । कोरोना संक्रमित निको हुने दर पछिल्ला दिन बढेको छ भने आईसीयू बेड र भेन्टिलेटरमा चाप कम भएको छ । जेठ १ मा संक्रमितको तुलनामा निको हुने ७४.४ प्रतिशत थिए भने शनिबार यो प्रतिशत बढेर ८९.३० प्रतिशत पुगेको छ । पछिल्ला तीन सातामा मात्रै १ लाख १८ हजार ५ सय ९२ जना निको भएका छन । शनिबार ५७ हजार ६ सय १६ जना सक्रिय संक्रमित छन ।
अस्पतालमा भर्ना हुने गम्भीर खालका संक्रमितको संख्यामा पनि ५० प्रतिशतभन्दा कमी रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले बताए । काठमाडौं उपत्यकाका १६ अस्पतालमा ४ सय २७ आईसीयू बेडमध्ये २ सय ५३ प्रयोगमा छन । त्यस्तै २ सय १ भेन्टिलेरमध्ये ९६ मात्रै प्रयोग छन । २ हजार ५ सय ५१ जनरल र एचडीयूमध्ये ७ सय १५ मात्रै प्रयोग भइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । कोरोनाबाट मृत्यु हुने दर १.६ प्रतिशत छ । हालसम्म ८ हजार ६ सय ७५ जनाको ज्यान गएको मन्त्रालयले जनाएको छ । जेठ ५ मा एकै दिन २ सय ४६ जनाको कोरोनाको मृत्यु भएको थियो । पछिल्लो २४ घण्टामा ३४ जनाको मात्रै मृत्यु भएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार संक्रमित काठमाडौं उपत्यकाभन्दा गाउँमा बढी देखिन थालेको छ । शनिबार काठमाडौंमा भन्दा बढी संक्रमित बागलुङमा भेटिए । काठमाडौंमा २ सय १ जना संक्रमितको पहिचान भएकामा बागलुङमा २ सय २५ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । ‘सहरमा निषेधाज्ञा भएकाले संक्रमित हुने दर घटेको छ भने गाउँमा बढेको छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. पौडेलले भने । काठमाडौं उपत्यकाका अस्पतालमा भर्ना भएका गम्भीर खालका बिरामी पनि गाउँबाट आउने गरेको उनले बताए । पछिल्लो साता संक्रमित भेटिने दर २०.५७ प्रतिशत छ । ‘संक्रमित हुने दर स्थिर छ,’ उनले भने, ‘अस्पताल पुग्ने र बाध्यतामा परेकाको मात्रै पीसीआर हुने गरेको देखिन्छ ।’
पछिल्लो २४ घण्टामा पीसीआर र एन्टिजेनबाट ११ हजार ६ सय ९६ जनाको परीक्षण गर्दा २ हजार ४ सय १ जना अर्थात् २० दशमलव ५२ प्रतिशतमा संक्रमण पुष्टि भएको छ । ‘संक्रमणको जोखिम पत्ता लगाउन स्थानीय तहसँग समन्वय गरी एन्टिजेन्ट परीक्षण गरेको थियौं,’ डा. पौडेलले भने, ‘संक्रमित न्यून देखिएको छ ।’
मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश १ का मोरङ, सुनसरी, झापा प्रदेश २ का धनुषा, पर्सा, महोत्तरी, बारा, सप्तरी र सिरहा ‘रेडजोन’ मै पर्छन । वाग्मती प्रदेशका काठमाडौं उपत्यका, चितवन, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली, नुवाकोट, दोलखा, रामेछापमा ५ सयभन्दा बढी सक्रिय संक्रमित छन । गण्डकीमा कास्की, गोरखा, नवलपरासीपूर्व, तनहुँ, बागलुङ, लुम्बिनीको दाङ, बाँके, रूपन्देही, पाल्पा, बर्दिया, कपिलवस्तु, नवलपरासी पश्चिम र रोल्पामा पनि ५ सयभन्दा बढी सक्रिय संक्रमित छन । कर्णालीमा भने सुर्खेत र दैलेख, सुदूरपश्चिममा डडेलधुरा, कैलाली, कञ्चनपुर, बैतडी, अछाम र डोटीमा ५ सयभन्दा बढी सक्रिय संक्रमित छन । ‘अहिलेकै अवस्थामा स्कुल, कलेज, सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न सकिँदैन,’ डा. पौडेलले भने, ‘बजार, पसल भने स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर खोल्ने समय बढाउन सकिन्छ ।’ स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको जोखिमको मूल्यांकनका आधारमा सीसीएमसीले स्मार्ट लकडाउनको अवधारणा अघि सारेको छ । विद्यालय खोल्न भने संक्रमण दर ५ प्रतिशतमा झर्नुपर्ने कान्तिपुरले लेखेको छ ।
प्रकाशित मिति: आइतवार, असार ६, २०७८, ११:३१:००